Real Madrid Oo Uu Daawan Jiray Yaraantiisii, Jacaylkii Uu U Qabay, Laba Jeer Oo Uu Iska Diiday, Benzema & Zidane Iyo Arsena Wenger Oo Wax Badan Caddeeyey - Laacib
HomeWararka Ciyaaraha MaantaReal Madrid Oo Uu Daawan Jiray Yaraantiisii, Jacaylkii Uu U Qabay, Laba Jeer Oo Uu Iska Diiday, Benzema & Zidane Iyo Arsena Wenger Oo Wax Badan Caddeeyey
Real Madrid Oo Uu Daawan Jiray Yaraantiisii, Jacaylkii Uu U Qabay, Laba Jeer Oo Uu Iska Diiday, Benzema & Zidane Iyo Arsena Wenger Oo Wax Badan Caddeeyey
May 1, 2021 Abdiwahab Ahmed Wararka Ciyaaraha Maanta, Wararka La Liga, Wararka Premier League 0
Tababarihii hore ee Arsenal ee Arsene Wenger ayaa daboolka ka qaaday, in Real Madrid uu si dhow ula socday tan iyo markii uu yaraa oo uu taageeri jiray markii uu carruurta ahaa, laakiin ugu dambayntiina uu ka helay fursado uu tababare ugu noqon karayay.
Wenger oo waraysi siiyey EFE ayaa yidhi: “Markii aan carruurta ahaa, Real Madrid ayaa ahayd kooxdayda. Waxa aan koray anigoo daawanaya Alfredo Di Stefano, Ferenc Puskas, Rymond Kopa, Santamaria, Paco Geno… Way iga farxin jireen.
“Waan jeclaa Real Madrid, waqti iyo samir ayaan u hayay, laakiin waxa aan ku dhamaystay anigoo ka hor imanaya iyaga.”
Waqtigii dheeraa ee uu Wenger joogay Arsenal ee kasoo bilowday garoonka Highbury illaa uu yimid Emirates Stadium oo uu dhismihiisa wax badan ku lahaa, waxa uu helayay dalabyo uga imanayay Real Madrid.
Isagoo ka hadlayay arrintan ayuu yidhi: “Laba jeer ayaan ku dhowaaday in aan tago Real Madrid. Dad badan waxba kama odhanin taas. Laakiin waxa aan qayb ka ahaa mashruuca dhismaha garoonka cusub ee Arsenal oo lagu beddelayay Highbury, waxaanay ahayd in aanu lacag u helno.
“Nafahayaga oo dhan ayaanu u hurnay. Cidina nama caawin. Garoonka dhexdiisa ayaanu ku bixinay iyo ciyaartooyo sare oo aanu iibinay iyo kuwo jaban oo aanu soo iibsanay.
“Taas ayay ahayd sababtii aan u tegi waayey Real Madrid. Waxa aan doonayay in aan dhamaystiro mashruucaas.”
Waxa kale oo uu Arsene Wenger sheegay in kooxo kale oo waaweyn oo Yurub ah uu dalabyo ka helay, waxaanu yidhi: “Waxa aan iska diiday qaar ka mid ah kooxaha ugu wanaagsan Yurub, haddana waan ku faraxsanahay taas sababtoo ah waxa aan muujiyey ka go’naansho, daacadnimo iyo in aan dhamaystiray mashruuc.”
Real Madrid ayuu sheegay in hadda ay ku jirto mashruucii uu isagu Arsenal u dhamaystiray oo kale, isla markaana ay dib u dhisayso garoonka Santiago Bernabeu, waxaanu yidhi: “Waxa aan ku faraxsanahay in gaoronku ku yaallo badhtamaha magaalada. Waxa uu qayb ka yahay nolosha dadku. Kubadda cagtu waa wadnaha magaalada.
“Taasi waa Real Madrid iyo garooinkeeda Santiago Bernabeu.”
Waxa kale oo uu Wenger ka hadlay Zinedine Zidane iyo Karim Benzema oo ka sokow in ay yihiin tababaraha iyo weeraryahanka Real Madrid, ay haddana Faransiiska u wada dhasheen Wenger.
Arsene oo waqtigan ka shaqeeye FIFA, waxa la weydiiyey dhaleecaynta loo jeediyo Zinedine Zidane, waxaanu ku jawaabay: “Waa dunida aynu ku noolahay. Real Madrid waxay samaysay waxyaabo cajiib ah, tababaraheeduna sidoo kale, laakiin waa kooxda dhamaadka noloshooda.
“Ciyaartoydu waxay doonayaan koob, waanay sii weynaanayaan, beddelaadooduna aad ayay u adag tahay. [Karim] Benzema, [Luka] Modric, [Sergio] Ramos… dhamaantood waxay ka weyn yihiin da’da 30 jirka, beddelaadooduna waxa ku baxaysa lacag aad u badan, mana garan karaysid in ciyaartoyda cusub ay heerkooda oo kale gaadhi doonaan.”
Karim Benzema ayaa isaguna xilli ciyaareedkan wacdaro dhigaya, laakiin kama mid noqon doono xulka qaranka France ee Euro 2020 maadaama tababare Deschamps uu sannadkii 2016kii ka saaray xulka.
Wenger oo wax laga weydiiyey ayaa yidhi: “Maaha wax ku xidhan awooddiisa kubadda cagta. Waa arrin aanan anigu waxba kala socon. Laakiin boqolkiiba boqol wuxuu u qalmaa in Euro 2020 uu ka qayb-galo, sida anigu aan arkayo. Wuxuu u ciyaari karayaa xul kasta oo dunida ah. Laakiin arrintani waa mid ka baxsan ciyaaraha.”
Waxa uu intaa sii raaciyey: “Wuxuu safka hore ee Real Madrid kusoo bilaabanayay in ka badan 10 sannadood. Dad badan ma samayn karaan sidaa.”